🥇 ▷ Cillad amni ayaa soo bandhigtay in ka badan 27 milyan oo diiwaanada noolaha ah ✅
Cillad amni ayaa soo bandhigtay in ka badan 27 milyan oo diiwaanada noolaha ah
Biostar 2, nidaamka qufulka noolaha oo ay maamusho shirkadda amniga ee Suprema kaas oo adeegsada faraha iyo teknolojiyadda wajiga aqoonsiga si loo siiyo dhismeyaasha la oggol yahay waxay lahayd cillad nabadgelyo oo adag taas oo keentay in ay kashifto ku dhawaad ​​28 milyan oo duubitaan ah iyo 23 GB oo ah xogta astaamaha noolaha, oo ay ku jiraan xogta aqoonsiga wejiga, furayaasha sirta ah, macluumaadka oggolaanshaha amniga iyo in kabadan 1 milyan oo faro-gelin ah.
Farqiga ayaa waxaa ogaaday shirkadaha internetka ee Noam Rotem iyo Ran Locar (oo iska leh VPN vpnmentor). Waxay xaqiiqsadeen in xogtu ay ahayd mid dadweyne oo la heli karo iyo in iyaga oo adeegsanaya shuruudaha raadinta URL ay marin u heli karaan dhammaan diiwaannada noolaha. Bishii la soo dhaafay, ayaa madal lagu rakibay nidaam marin kale, AEOS, kaasoowaxaa isticmaala 5,700 urur oo ku kala yaal 83 waddan, oo ay ku jiraan Bilayska Boqortooyada Ingiriiska, bangiyada iyo shirkadaha difaaca.
Shirkadda Rotem ayaa sheegtay inay dhowr jeer isku dayday inay la xiriirto Suprema ka hor inta aysan natiijada u keenin saxaafadda, laakiin weli jawaab kama helin. Dhanka kale, sarkaalka ugu sarreeya suuqgeynta Suprema, Andy Ahn, wuxuu ku sheegay wareysiga lala yeeshay Mas’uulka in shirkaddu sameysay “qiimeyn qoto dheer” ee baaritaanka vpnmentor iyo in ay la socodsiin doonto macaamiisha haddii ay jirto khatar.
“Haddii ay jirto khatar muuqata oo soo food saartay badeecadeenna iyo / ama adeegyadeena, waxaan qaadi doonnaa tallaabo deg deg ah waxaanan sameyn doonnaa ogeysiisyo ku habboon oo aan ku ilaalinayno macaamiisheena ganacsiyadooda iyo hantidooda qiimaha leh,” ayuu yidhi. Nuglaanta waa la xiray ilaa markaa.